‘Jesus never advertised’ » ZOOM Zimbabwe News
May 24, 2019 221 No comment
Some members of the church refused to comment on the issue. One of the big five, Madzibaba Katsiru distanced the church from members who purport to be real Madzibaba going against the doctrine.
He added: “Some are not even the real Madzibaba, they just come from nowhere and you guys (journalists) are taught the wrong things mototanga kufamba nevanhu ivavo.”
He added: “If we look at churches in Zimbabwe, our church has many branches and if you look at your backyard, there is our church, so if people have problems and are looking for help from Masowe, they can go anywhere.
More on ZOOMZimbabwe... Congregants melt away their problems with lighted candles on their heads
More on ZOOMZimbabwe... Man stabs nyau dancers during dance procession
Like now the spirit is saying there will be diseases in the coming months, and people can only know this by coming kumasowe. H-Metro
Tags: African customs and beliefs Mapostori
President Mnangagwa leaves for Ramaphosa inauguration